ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “လက်အိတ်ဝတ်ထားတယ်....”
Myat No said...
mob ကြီးပွတ်ပြတယ်....ကိုယ် အန်မိတော့မယ်.." ;p
ဟေ့ ဟေ့ ဒီလို လူလည်ကျလို့ ဘယ်ရမလဲ.. ညာခိုင်းတယ် (နိုင်နံရေးသမားတွေများ ဟိဟိ..)
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုပေါ နှစ်သက်မယ့် စတိုင် ဘလော့အသစ် တစ်ခု ညွှန်းပါရစေဗျို့။
တော်သေးတာပေါ့၊ ကိုယ်စောင့်နတ်က ကိုပေါလို အားမနာတတ်လို့။ ဆက်တွေးမိသွားတယ်။ ဝတ်ထားတဲ့ လက်အိတ် ဟန်ပြသက်သက်ဆို ချွတ်ထားတာမှ ကောင်းသေးတယ်လို့။ အဲဒီဆိုင်ကို ရိပ်မိသလိုပဲ။ သွားတိုင်း အစားအသောက်ငမ်းနေတော့ လက်အိတ်ကိစ္စ သတိမထားမိဘူး။
လူရှင်းတဲ့ တနေ့လောက် ပြောရဲအောင် ပြောကြည့်ပါလား..
အဲဒီကလေးမက တကယ်မသိတာပဲ ဖြစ်မယ်..
ပြန်ရန်တွေ့လဲ တခွန်းမှ ပြန်မပြောပဲ ပြန်လာလိုက်ပေါ့..
ကျမတော့ ပြောချင်လိုက်တာ ပါးစပ်ကို ယားနေတာပဲ...
ကိုပေါ ဘလော့ခ် ကို အခု မှ သိ လို့ ။ နောက် တော့ မှန် မှန် လာ လည် ပါ မယ်။
Regarding intervention, I want to put in my2cents. I was inacafe shop at an airport withacolleague whoacitizen of the free world. We were sitting inanon smoking area and there wasagirl who started to lightacigraette. So while I was thinking of whether should I intervene, then my friend walked up there and told her that this isanon smoking area and so she has to abide by the laws. I learned something that day, I am quite outspoken among Burmese but I was not up to the standard ofacitizen ofafree world. So I was there and figuring out why we are ruled by those bastards at home. Because we still suck them, all they have to do is lowering the pants!!!!
လာလည်ကြတဲ့သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
…..မြတ်နိုးရေ…..ပို့စ်ခေါင်းစဉ်က တကယ်ဘဲ ဘိုဘိုဟန်သီချင်းကို ယူထားတာပါ။
…..ပန်ဒိုရာရေ….ကျနော်က သာမန်ပြည်သူတဦးပါ။ (အဲဒါ ကလူသစ်ပြောတဲ့ ၂၀၀၇မှာ ရေပန်းအစားဆုံးစကားတဲ့။) ဘလော့ဂ်ညွှန်းတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ စံဒေ၀ီဆိုတော့ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းကို ပြေးသတိရမိသေးတော့။
……..ကလူသစ်…..ဖောက်ထွက်ပြီး တွေးတဲ့နေရာမှာတော့ တော်ပါပေတယ်ဗျာ။
….မခင်မင်းဇော်… တိုက်တွန်းထားတာလေးက ကွန်မင့်သက်သက်ဖတ်ကြည့်ရင် ရည်းစားစကားမပြောရဲတဲ့ကောင်လေးကို ရည်းစားစကားပြောဘို့ မြှောက်ပေးနေတာနဲ့ မတူဘူးလား….ဟိဟိ…။ နောက်တာပါ။ ကျနော် နောက်တခါ သွားစားလို့တွေ့ရင် ပြောနိုင်အောင် သတ္တိမွေးလိုက်ပါဦးမယ်။
……၉၆၀ိုင်အိုင်တီ..ရေ။ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
….ကိုအမည်မသိ။ သဘောတူပါတယ်။ ခင်ဗျားကွန်မင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် ပို့စ်တခု သတ်သတ်ရေးပါဦးမယ်။ ကျနော်လည်း အဲသည် ကိစ္စကို သတိထားမိနေတာ ကြာပါပြီ။
ှဆီဗုံးလေး ဖွင့် ပါ ဗျို့ ။ အလုပ်များမှန်းသိပေမယ့် စောင့်ဖတ်နေပါ တယ်။
ကိုပေါရေ ကျွန်မက အင်မတန်ရွံတတ်တဲ့ လူထဲမှာပါပါတယ် ။ ဒီအမျိုးသမီးလုပ်ရပ်ကို ဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာ ဝေါ့ခနဲဖြစ်မိပါတယ်။ ပန်နီဆူးလားဆိုင်တွေမှာ ထမင်းသိပ်မစားဖြစ်တော့ ဘယ်ဆိုင်မှန်းတော့ မခန့်မှန်းတတ်မိဘူး။ ကျွန်မစိတ်ထင်တော့ သူမကို တည့်တည့်သွားပြောတာထက် အကြံပြုစာဗောက်စ်လေး သူတို့ဆိုင်မှာများရှိရင် စာရေးပြီး အဲဒီဗောက်စ်ထဲကို ထည့်လိုက်တာ ပိုသင့်လျော်တယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ အစားအသောက်တွေက သန့်ရှင်းဖို့ သိပ်လိုအပ်ပါတယ်။ အသိပေးတဲ့ဒီပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးပါ :)
အဲဒီအမျိုးသမီး ဒီပို့စ်ကို လာဖတ်ဖြစ်ရင်တော့ ဘယ့်နှယ့်နေမယ် မသိဘူးဗျ။ :D အနီးအနားမှာဆိုရင်တော့ ကိုပေါ ဘလော့ဂ် ဒီမှာဗျ ဆိုပြီး သွားပြလိုက်ရင် ကောင်းမလားဘဲ။ :P
ဆိုင်နံမည် နဲနဲလေးအတိတ်စိမ်းပေးပါလား။ ကိုပေါပြောခိုင်းတယ်ဆိုပြီး သွားပြောပေးမယ်လေ
ကို ၉၆၀ိုင်အိုင်တီ......ဒီမိုကရေစီရရင် စီဗုံးဖွင့်မယ်ဗျာ။
မလင်းလက်........အခုဆိုရင် သူတို့လည်း တနည်းနည်းနဲ့ သိလောက်ပြီ ထင်ပါ့ခင်ဗျာ။
အိမ်...........ပစ်စာပစ်တာ လက်မတည့်ဘူးဗျ။ တော်ကြာ တလွဲဆိုင်ရောက်သွားလို့ ပြေးပေါက်မှားနေဦးမယ်။ ခွိ
ကိုစေးထူး........စင်္ကာပူလာလည်ရင် အဲသည်ဆိုင်မှာ လက်သုပ်စုံလိုက်ကျွေးပါမယ်ဗျာ။း-)
နေနေ........အဲဒါ မနေ အသုပ်စားနေကျ ဆိုင်ပေါ့ဗျ။ မနေ တောင် ပြောသေးတယ်လေ။ အရသာအရမ်းရှိတယ်ဆိုတာ။
ရခိုင်နွယ်.....ဆိုင်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ တခြားဆိုင်တွေတော့ ကျနော်သတိမထားမိဘူးလေ..ဟိ